रोजगारीका लागि दुवइ गएकी यी चेलीको अ’हिले स’म्म’कै का’मुक भिडियो सार्वजनिक !! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Babal Khabar
Friday, December 4www.babalkhabar.com : For your kind information
रोजगारीका लागि दुवइ गएकी यी चेलीको अ’हिले स’म्म’कै का’मुक भिडियो सार्वजनिक !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
November 6, 2020 November 6, 2020 by bikash
म एक १७ वर्षीया युवती हुँ । म विगत पाँच वर्षदेखि पटक पटक बेहोस हुने समस्याबाट पीडित छु । मेरो यो समस्याको निदानका लागि घरमा धामी झाँक्री बोलाउनेदेखि विभिन्न अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । मैले छारे रोगको औषधि पनि सेवन गरिसकेकी छु ।
तर, मेरो समस्या समाधान भएको छैन ।स्वास्थ्य जाँचकै क्रममा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले हि’स्टेरिया भएको र यसको उपचारका लागि बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने सल्लाह मेरो अभिभावकलाई दिएका छन् । म अहिले ११ कक्षामा अध्ययनरत छु । बिहे नगर्ने पक्षमा छु । हिस्टेरिया भनेको के हो र। के यो बिहे गरेपछि निको हुने रोग हो र। मैले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला । उपचार हुने युगमा पनि हिस्टेरियाले गर्दा तपाईंले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक पीडा सुन्दा दुःख लाग्यो । नेपालमा हि’स्टेरिया को बारेमा सर्वसाधारणमा त पर्याप्त भ्रम छ नै, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीमा पनि यो रोगबारे विभिन्न भ्रम रहेको पाइन्छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
स्वास्थ्यकर्मीले नै गलत धारणा सार्वजनिक गर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सर्वसाधारणको भ्रम हटाउन मुश्किल छ । मेडिकल क्षेत्रमा आजभोलि यो शब्दको प्रयोग नगर्ने वा प्रयोग गर्न हतोत्साहित गर्ने रणनीति चिकित्सकहरूले लिएका छन् । यसको कारण भनेको हि’स्टेरियालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याभन्दा पनि यौ न चाहना बढी भएपछि हुने वा यौ न चाहना पूरा नभएको अवस्थामा हुन सक्ने समस्या भनेर गलत ढंगले व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको कारणले गर्दा नै हो । यो रोगको वैज्ञानिक उपचार सम्भव छ । उपचारका लागि दक्ष मनोचिकित्सक वा तालिमप्राप्त अन्य चिकित्सक कहाँ गएर विस्तृत रूपमा मनोविश्लेषण गरी कुन रोग हो, यकिन गर्नुपर्छ । वास्तवमै डिसोसिएटिभ डिसअर्डर हो भने मनको कुण्ठालाई केलाएर त्यसको समाधानका लागि मनोपरामर्श गर्नुपर्छ । मनोपरामर्शबाट बिरामीको समस्या समाधान नभएमा बिरामीलाई चित्त बुझाउने अन्य उपायको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य शा’रीरिक वा मानसिक लक्षण भए सोहीअनुरूप औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यो रोग बिहे नभएकै आधारमा लाग्ने होइन । यस्तो समस्या पुरुषमा पनि देखिन सक्छ । बिहे गर्दैमा यो समस्या समाधान पनि हुँदैन । बिहेसँग मात्र यो रोगको सम्बन्ध हुँदैन । मनको कुण्ठामा से क्स पनि एउटा अंश हुन सक्छ । तर, पूरै से*क्ससम्बन्धी कुण्ठाका कारण यो रोग लाग्छ भन्नु वैज्ञानिक दृष्टिबाट अपूर्ण हुन जान्छ ।सैले, तपाईं आफ्ना अभिभावकलाई मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषयबारे बुझाउने कोसिस गर्नुहोला । अन्य चिकित्सककोमा धाइरहनुभन्दा एक पटक मनोचिकित्सकलाई भेटेर आफ्ना समस्या खुलस्त बताउनुस् । जसबाट तपाईंको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र उपचारका लागि सहयोग पुग्नेछ । तपाईं भर्खर १७ वर्षको हुनुहुन्छ र १२ वर्षदेखि नै यो समस्या भोग्दै आउनुभएको छ भने तपाईंले उपचारमा ढिलो गर्नुभयो भने रोगले अझै च्याप्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अभिभावकलाई सम्झाएर तपाईं उपचारका लागि सही चिकित्सककोमा जानुभयो भने तपाईंको रोग निःसन्देह निको हुन्छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Prevकाठमाडौं उपत्यकाका यी ठाउँमा एक्कस्सी सस्तियो जग्गाको भाउ, जग्गाको मूल्य होटलमा मा’सुभात खाए बराबर !!
nextखुशीको खबर: कोरोना सङ्कटको बेलामा जागिर चाइयो ? हामी दिन्छौं जागिर, तलब २० देखि ३० हजारसम्म ।।
कोरीया जान चाहनेको लागी खुसीको खबरः कोरिया जानेको रोकिएको काम पुनः सञ्चालनमा ल्याई कोरिया लाने प्रक्रिया छिट्टै नै शुरु हुने
एउटा गंगटाको मूल्य ५० लाख ? अचम्म् लाग्यो ? पुरा खबर पढनुस
भागेर काठमाडौं आएकी अञ्जली अधिकारीको यस्तो रैछ कहानी , पुरा खबर
खुसीको खबरः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खोले टिकटकमा खाता, पहिलो भिडियो नै यति धेरैले हेरे
प्याराग्लाइडिङ दुर्घ’टना : उडेकै बेला रुखको पात टिपेर यस्तो गर्दा पाइलटको ज्या’न गयो, युवती ग’म्भीर घाइते
जान्नुहोस राती सुत्नु अघि जप्नै पर्ने मन्त्र, एक पटक पढनुहोला
एउटै कुकुरको मूल्य २२ करोड ! किन त ? पुरा खबर पढनुहोस
बरु ज्या’न जाला तर, महिलाले कहिल्यै भन्दैनन् आफ्ना यी रहस्य, थाहा पाउनुस
एक बर्षको बच्चाले खेल्दा खेल्दै अचानक जिउँदो सर्प निलेपछि भयो यस्तो
एकदमै दुखद खबरः भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीको नि’धन
कोरोनाको बिषयमा चिनले गर्यो यस्तो अचम्मको खुलासा, थाहा पाउँदा सबै चकित
प्रचण्डलाई च्यालेन्ज – ‘महाधिवेशनमा भिड्ने भए तयार छु, हिम्मत छ?’ के भयो यस्तो पुरा खबर पढनुस
हेर्नुहोस, यो एउटा आलुको मुल्य १२ करोड ! किन होला त?
ह्वात्तै घटयो सुनको मुल्य , तोलाको यति पुग्यो
गाँ’जा पि’उने केसमा प’क्राउ परेकी भारतीको बयानले प्र’हरी नै चकित !पुरा खबर पढनुस
घरको यस दिशामा राख्नुहोस् गाईको तस्वीर, हुनेछ दुर्भाग्य नास, अाउनेछ सुख र समृद्ध
सावधान ! खाना खाँदा पानी पिउने व्यक्तिलाई हुन्छ यस्तो ख त रा ।
यि राशिका महिलाहरू श्रीमानलाई मनाउन खप्पिस हुन्छन्, तँपार्इ पर्नु भयो ?
श्रीमतीको बिवाह पहिले नै यति धेरै पुरुषसँग सम्बन्ध रहेकाे थाहा पाएपछि, श्रिमानले गरे यस्तो